Dhibaneyaashii Kooxda Chapecoense : Premier League Oo Barroor-diiq U Sameeyey
HomeWararka MaantaDhibaneyaashii Kooxda Chapecoense : Premier League Oo Barroor-diiq U Sameeyey
Ciyaaryahanada horyaalka Premier League ayaa tacsi u diray kooxdii iyo qoysaskii ay ciyaaryahanadoodu ku dhinteen shilkii diyaaradeed ee Isniintii ka dhacay wadanka Colombia ee 19 ka ciyaaryahan kaga dhinteen kooxda Chapecoense.
shaqaalihii naadiga iyo suxufiyiin la socday ayaa iyaguna ka mid ahaa 71 qof ee shilkaas duleedka magaalada Medellin ka dhacay – ku naf waayay.
Daqiiqad aamus ah ayaa la samaynayay ciyaar kasta oo kamid ah horyaalka Ingiriiska maalintii Sabtida.
Difaacyahanka xulka Brazil iyo naadiga Chelsea ee David Luiz, oo kooxdiisu kaga badisay Manchester City 3-1, ayaa yidhi: “Guushan waxaan u hibaynayaa dadkii shilka ku dhintay.”
ciyaaryahan Arthur Maia oo ay iska barbar ciyaari jireen David Luis wakhtiyada qaar, ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay shilkaas diyaaradeed.
“Todobaad aad u adag ayuu noo ahaa, khaas ahaan qiiro ah,” ayuu hadalka sii raaciyey Luiz, oo kor u haya marada madow ee qoraalka tacsida ahi ku qoran yahay, isaga oo uu wehelinayo saaxiibkii Willian iyagoo u damaashaadaya goolkii labaad ee uu ka dhaliyey Manchester City.
“Way nagu adkayd diyaar garowga ciyaar sidan oo kale u adag. Imika waxaanu u ducaynayaa qoysaskii, inay nafis dareemaan maadaama oo ay xaalad adag ku jiraan.”
Laacibka khadka dhexe naadiga Blues uga ciyaara ee Willian ayaa isna yidhi “Waxaan doonaynay inaan guushan u samayno dartood, si aanu ugu sheegno inay niyada adkeystaan”.
Xiddiga asal ahaan ka soo jeeda Brazil ee weerarka uga ciyaara Chelsea – Diego Costa ayaa isna sii raaciyey: “Waanu u ducaynaynaa, In ilaahay samir ka siiyo.
“Shaqadan ayaanu ku dhex jirnay, mararka qaar in badan ayaanu safaro galnaa, Waxaan jecelnahay inaan tacsi u dirno dhamaan cidii ku dhimatay shilkaas diyaaradeed, suxufiyiintiina, ciyaaryahanadii iyo shaqaalihii kaleba.
“Saaxiibo ayaan sidoo kale kulahaa kooxdaas. Waa xili murugo qof kastana wuu dareemayaa, waxaanan rajaynayaa inaanu wax uun ka caawin karno.”
Ryan Giggs Iyo Suurto-galnimada Tabbobarenimo Ee Swansea
Guus Hiddink Oo Si Rasmi Ah Loogu Magacaabay tababaraha Ku Meel Gaadhka Ah ee Chelsea…
Khabiir GUUS HIDDINK ayaa loo doortay inuu noqdo tababaraha ku meel gaadh ka ah ee kooxda Chesea, sidaas waxaa bogooda khaaska ah ee Twitter ka ku baahiyey xulka qaranka wadanka Australia.